Aprilia | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
WSBK Phillip ကျွန်း: Laverty, ဆူဇူကီးနီးပါးပြပွဲအားကစား Rider ကိုခိုးယူ
2010 Aprilia RXV5–5ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း @ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်သုံးသပ်
Aprilia Tuono V4R APRC vs. Ducati Streetfighter S Brute Force! – ဆိုငျကယျသမား…
APRILIA SR 50 SBK REPLICA – 2011 ဆိုင်ကယ် Mopeds
Aprilia Scarabeo – ပိုင်ရှင်မော်တော် Scooter လမ်းညွှန် Reviews
နေအိမ် → Aprilia
အခုလည်း: Aprilia | 20 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments on ဆန်းစစ်ခြင်း: Aprilia Dorsoduro 750 မျိုးစုံစရိုက်နဲ့စက်ဘီးဖြစ်ပါတယ်…
ဆန်းစစ်ခြင်း: Aprilia Dorsoduro 750 isabike with multiple personalities Aprilia Dorsoduro 750 Click above for high-res image gallery We were more thanalittle excited to throwaleg over the new Aprilia Dorsoduro right after unloading it from the back of our trailer. After all, the last time we rodeasupermoto bike from the Italian motorcycle manufacturer (SXV 550) we hadablast backing the bike into corners and lofting the front wheel at will. Plus, the Dorsoduro certainly has plenty of streetfighter attitude when painted up in our tester’s all-black color scheme. As such, we wasted little time firing up the V-twin engine, getting ourselves familiar with the controls and layout and ...
အခုလည်း: Aprilia | 19 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments on အဆိုပါ Aprilia Dorsoduro ၏ပထမဆုံးတွေ့ကြုံ 1200 – Aprilia ပြန်လည်သုံးသပ်, မော်တော်ဆိုင်ကယ်…
အဆိုပါ Aprilia Dorsoduro ၏ပထမဆုံးတွေ့ကြုံ 1200 When I found out the Dorsoduro was coming ina1200 I had an idea that it could finally supersede my Buell XB12X,abike I have owned, loved and ridden daily for the last4နှစ်ပေါင်း. The Buell XB12x (known as the Ulysses,aterrible name) isagreat bike but something new had to be on the horizon and there is not exactlyamassive rangevin the market for large super motard style bikes. There is the Ducati Hypermotard 1100. there isathe KTM Super Duke 990R (moreanaked streetfighter), အဆိုပါ KTM 990 Supermoto and until now not really much else. They are all great bikes in their own rights but for one reason or another haven’t grabbed me. I like ...
အခုလည်း: Aprilia | 19 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments on 2011 Aprilia SV 450-Aprili
အခုလည်း: Aprilia | 19 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments on Aprilia Scarabeo 50 vs 100 ဆန်းစစ်ခြင်း 1 ဆိုင်ကယ် Mopeds
Aprilia Scarabeo 50 vs 100 ဆန်းစစ်ခြင်း 1 Aprilia Scarabeo 50 vs 100 ဆန်းစစ်ခြင်း 1 Which is the philosophy that distinguishes the 2007 Design Year. Despite the fact that it obtained crucial updates, it did not betray the philosophy behind its iconic status. The style is overflowing by brand-new stylistic components using an optical class whose design and also technologies was redesigned. The posterior light is absolutely renovated using LED technologies to increase back visibility and carries excellent security ramifications. The blinkers have adopted white glass havingaglazed structure. The front light has been specifically changed as well as the steering wheel is enhanced. An sophisticated front ...
အခုလည်း: Aprilia | 19 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments on 2009 Aprilia Mana 850 GT ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း – အဆုံးစွန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
အခုလည်း: Aprilia | 19 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments on 2010 Aprilia Scarabeo 200 - အသုံးပြုခံ့ 2010 Scarabeo 200 ဆိုငျကယျသမားမဂ္ဂဇင်းမှာ
အခုလည်း: Aprilia | 19 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments on Aprilia NA 850 Mana နှင့်ဟွန်ဒါ NC 700 S က DCT မော်တော်ဆိုင်ကယ်
ဖေါ်ပြချက် : အဘယ်ကြောင့် clutch ဖြစ်ကြောင်းနှင့်နည်းပညာလုပျနိုငျပါလျှင်အကူးအပြောင်း? အလိုအလျောက်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပိုပြီးပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်လာကြပြီ, ဒါပေမဲ့သူတို့အသုံးဝင်သောဘာတွေလုပ်နေလဲ, အဘယ်သူကိုဖြစ်ကောင်းမှန်ကန်စွာတစ်ဦးအတွက်စိတ်ပျက်ဖွယ်? နှိုင်းယှဉ်လျှင်အပြောင်းအလဲတွေဟာနှင့် Dual-clutch ဂီယာ. မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက်အသစ်ထုတ်လုပ်ယာဉ်များတစ်ဦးကကြီးမားသောအချိုးအစားတစ်ခုအော်တိုဂီယာနှင့်အတူပရိသလိုင်းများအရွက်. အပူဆွေးနွေးမှုများမှ Stammtisch ဒီအာမင်လိုက်ပါတယ်, မရှိတော့နှစ်ပေါင်း, နှင့်လွတ်လပ်သို့မဟုတ်ဆိုဖှယျ gearshift တစ်ကန့်သတ်ခဲမည်သူမဆိုညည်းတွား. အဲဒီအစားဆန့်ကျင်ဘက်ကိစ္စဖြစ်ပါသည်. ကို manual ဂီယာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခေတ်မီအော်တိုတစ်ဦးနှစ်သိမ့်အတွက်အမြတ်နှင့်လွယ်ကူခြင်းကတိပေးထားတယ်, နှင့်ဒိုင်းနမစ်မှာအကောင်းဆုံးတစ်ခုတိုးလာ. All those who have ever ...
အခုလည်း: Aprilia | 19 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments on WSBK Phillip ကျွန်း: Laverty, ဆူဇူကီးနီးပါးပြပွဲအားကစား Rider ကိုခိုးယူ
WSBK Phillip ကျွန်း: Laverty, Suzuki almost steal the show 146-1402-+world-superbike-phillip-island+1.jpg For better and for worse, ယူဂျင်း Laverty Phillip ကျွန်းအတွက် WSBK ရာသီဖောက်တံများတွင်ဇာတ်ကောင်ခဲ့သည် . လူမျိုးအတွက် 1, အဆိုပါဆူဇူကီးမြင်းစီးသူရဲတစ်ဦး Win-လျော့နည်း Streak ကြားဖြတ်မှသတ္တမအနေအထားကနေအံ့မခန်းတစ်ကျော့ပြန်နှင့်အတူပြပွဲခိုးယူ 94 ဂျပန်လုပ်ငန်းခွင်များအတွက်လူမျိုး (အဆိုပါ GSX-R ကိုနောက်ဆုံးအနိုင်ရပြန်ရက်စွဲပါ 2010, Kyalami အတွက်, တောင်အာဖရိက) ပြန်မှအနိုင်ရ- မတူညီသောစက်ဘီးပေါ်ကျောလူမျိုး (Aprilia ကနေပြောင်းပြီးနောက်). လူမျိုးအတွက် 2, သူ polesitter Sylvain Guintoli ဆန့်ကျင်ထိပ်မှာတိုက်ပွဲစဉ်သည်သူ၏အင်ဂျင်သွားကြဖို့ခုနစ်ခုသောက်အတူတက်မှုတ် (Aprilia) နှင့်ရီ Baz (Kawasaki), prompting ...
အခုလည်း: Aprilia | 19 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments on Aprilia Tuono V4 R ကို APRC အပေါ်လျင်မြန်စွာစီး – မော်တော်ဆိုင်ကယ်ခရီးစဉ်သတင်းများ – မော်တော်ဆိုင်ကယ်…
Quick ride on Aprilia Tuono V4 R APRC Sunday, ဇူလိုင်လ 15, 2012 At Just Ride Motorbike Tours and Rentals we are always looking for motorbikes that have that certain quality that makes them stand out, regardless of whether they arearetro, naked, အားကစား, tourer or cruiser type. Aprilia is one brand that has caught our eye with their exciting range of motorcycles that epitomise pure riding enjoyment. In this article we will tell you about our test ride on the Aprilia Tuono V4R APRC. You can read full technical reviews elsewhere on this amazing bike. Some are listed below. Here I will just give my impressions on how the Tuono feels, why I would choose it for our collection and what you can expect ...
အခုလည်း: Aprilia | 19 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments on Aprilia Dorsoduro ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း – Hypermotard Killer? – Moto-Related – Motocross…
Aprilia Dorsoduro ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း – Hypermotard Killer? 8/8/2008 3:13 PM 2008 Aprilia Dorsoduro Review Supermoto Style Done Just Right story by Yossef Schvetz, Photograph by Piaggio, Created Jul. 31, 2008 Here’satip for Aprilia’s sales floor managers: Ifapotential Dorsoduro buyer walks into your dealership, blindfold him and seat him on the Dorsoduro, start the engine and let him play with the throttle. Another sale – done. It’s beenalong, long time since an engine’s sound got me so horny, provoking uncontrollable spasms in my annular muscles down there and unhealthy tension in my branded knickers. In our PC/castrated- exhaust era, we’ve seemingly forgotten just how ...
မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် ဟွန်ဒါ DN-01 Moto Guzzi 1000 Daytona Injection ဆူဇူကီး AN 650 ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down Ducati Diavel တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic စက်ဘီး Kawasaki ER-6n Aprilia Mana 850 Bajaj Discover ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို Brammo Enertia ဆူဇူကီး Colleda CO Ducati Desmosedici GP11 KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို စမတ် eScooter စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို Ducati 60